Mashiinnada Qodista Godka Dheer, Aaladaha Qodidda Godka Dheer - Deshen
Shandong Deshen Makiinado Warshadaha Co., Ltd.
Single/double/afar mashiinka qodista qoriga dunmiiqa
Heerka qodista godka: 1mm-40mm
Qoto qodista godka: ilaa 4000mm
Nidaamka rakibida iyo rakibida otomaatiga ah ayaa la heli karaa
Codsiga:Qalabka caafimaadka, Gawaarida, aerospace, caaryada iyo geerida, qalabka hydraulic, militariga, iwm
Xakamaynta CNC: X, Y, Z dhidibka waa CNC la kontoroolo
Qodista Xoogan:3mm-100mm (BTA iyo nidaamka qodista qodista qoriga)
Qoto qodista godka:ilaa 3000mm
Nidaamka shaqada mashiinka: Qodista qori iyo miiska shaqada ee la tilmaami karo ee BTA waa ikhtiyaari
Codsiga: Waxay leedahay hawsha qodista dalool toos ah, dalool u janjeersan, dalool indho la 'iyo dalool talaabo.
Waxaa si weyn loogu isticmaalaa baabuurta, warshadaha mootada, warshadaha caaryada, warshadaha milatariga, warshadaha hawada, jirka waalka hydraulic, usha marsho iyo qaybo kale oo ah daloolka qotada dheer.
Ka -hortagga caajiska/gubashada: 20mm-800mm
Mashiinkani waa mashiin gaar ah oo lagu farsameeyo qaybaha daloolka qotada dheer ee cylindrical, kaas oo ku habboon qodista iyo caajiska qaybaha godka qotada dheer. Inta lagu guda jiro qodista, habka BTA waa la qaatay, taas oo ah, quudiyaha saliidda wuxuu siiyaa saliid, goynta ayaa laga soo saaraa gudaha tuubada qodista ilaa baaldiinka qashin -qubka ee sariirta gadaasheeda iyada oo loo marayo aagga goynta. Markay caajis tahay, saliidda waxaa la quudiyaa dhammaadka baarka caajiska ah, jajabkana waxaa lagu shubaa baaldihii qashin -qubka ee madaxa mishiinka iyada oo loo marayo aagga goynta.
dhoolatusyada qoriga la tilmaami karo: 11.5mm-50mm
layliyo qoriga brazed:3mm - 45mm
layliyo qoriga carbide adag:1mm ilaa 12mm
Shandong Deshen Machinery Manufacturing Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2017, oo ku salaysan Dezhou, Shandong, China. Waa shirkad walaalo ah oo ka tirsan Dezhou Drillstar Cutting Tool Co., Ltd. (www.drillstarcuttingtool.com). Deshen waa shirkad xirfad leh oo ku hawlan iibinta, wax-soo-saarka iyo adeegyada farsamo ee mashiinnada qodidda godka qoto dheer, aaladaha qodista godadka qotada dheer iyo qalabka, iyo sidoo kale adeegga wax-ka-qabashada saxda ah.
Xarunteedu tahay Dezhou City, Gobolka Shandong, aagga adeeggu wuxuu daboolayaa Shiinaha iyo Koonfur -bari Aasiya, Bariga Dhexe, Koonfurta Ameerika, Yurub iyo gobollada kale. Badeecadaha waxaa si weyn loogu isticmaalaa aerospace, quwadda nukliyeerka, awoodda dabaysha, wax soo saarka mashiinnada, wax soo saarka baabuurta, qalabka caafimaadka, dhismaha maraakiibta tareenka, warshadaha caaryada, warshadaha dhuxusha iyo saliidda, milatariga iyo wixii la mid ah. Shirkaddu waxay u qaadataa dalabka macmiilka hadafka iyo "adeeg daacad ah, hal -abuurnimo saynis iyo farsamo" sida fikradda shirkadda; teknolojiyadda heerka koowaad, tayada badeecadda heerka koowaad iyo adeegga heerka koowaad waa ballanqaadka iyo baacsiga Deshen.
mashiinka qodista baarka wareega
Furimaha qodista qoriga
oo aan lahayn hal dahaadh leh ...
Qoryaha la soo waarido oo t ...
Biibiile Single Iyadoo qabow ...
Daad CNC Deep ho ...
Qalabka Tallaabada iyo Tijaabada waxaa laga yaabaa in lagu daro codsi si loo tirtiro laba-saddex hawlgal oo ku xiga hal god. Isticmaalka aalad talaabo ayaa si weyn u yaraysa wakhtiga wareegga, xoqidda, iyo isku dheelitirka u dhexeeya dhexroorka. MAS'UULIYADAHA TALAABOOYINKA Dhoola -tusyada tallaabooyinku waxay leeyihiin xaddidaadyo wax -soo -saar oo ku xiran inta u dhexeysa tallaabooyinka dhexroorka xad -dhaafka ah. Horumarinta carbide khaas ah ayaa mararka qaarkood laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto sababtoo ah meesha godka qaboojiyaha. Intaa waxaa sii dheer, jabiyayaal ayaa laga yaabaa in loo baahdo sababtuna tahay la'aanta xagal gudaha wh ...
Tallaabooyinka iyo Aaladaha Tijaabada waxaa laga yaabaa in lagu daro ...
Shandong Deshen Makiinado Warshadaha Co., Lt ...
PCBN (nitride boron cubic)
PCD (dheeman polycrystalline) Polycrystalline cubic boron nitride - Af -Ingiriisiga oo loo soo gaabiyo PCBN (cubic boron nitride) Qalabka CBN guud ahaan wuxuu ka shaqeeyaa Birta Birta iyo qaybaha birta !!! N ...
Usha sharafta leh:
Faa'iidooyinka: Waxaa loo adeegsadaa dhammaynta mashiinnada fekerka qotada dheer, xallinta dhibka mashiinka ee macaamiisha; Awood u leh inuu hagaajiyo toosnaanta caajisnimada, hagaajinta saxnaanta shaqada shaqada; Naqshaddu waa mid sahlan oo sahlan in la isticmaalo; Nolosha aaladda dheer, dib ayaa loo ...